Iimidlalo Yevidiyo | June 2022
Isiphelo 'sendlela yokuphuma' siquka eyona ibalaseleyo kunye neyona mibi yeVidiyo yokuBalisa amaBali
Ukunxibelelana kunokunceda umdlalo udlule kwezinye iindlela — ukuba awunangxaki
Ukulinda ikamva lokwenyani eliyinyani
Ngaphandle kwenkqubela phambili kule minyaka mine idlulileyo, i-VR njengeendlela zokuzonwabisa ngobuninzi zisabonakala njengeendlela zokuhamba. Kuya kuthatha ntoni ukutshintsha loo nto?
Umqambi womdlalo wevidiyo uHideo Kojima udibanisa i-cinema kunye nomdlalo weqonga osebenzisanayo ekukhululweni kwakhe kwakutshanje, ebonisa ukwenziwa kwemiboniso eshukumayo evela kwiinkwenkwezi ezininzi zemidlalo bhanyabhanya kunye nomabonwakude, kubandakanya ukujika kwenkwenkwezi okuvela kuMad Mikkelsen
Ukukhangela kubukumkani bamakhowa
Amacandelo ama-docuseries amahlanu aqala ngoMvulo eCrackle
Ukufundwa komlinganiswa: I-Chun-Li, elona Bhinqa liQinisekileyo kwiHlabathi kunye neQhawe lokwenyani loMdlalo oLungileyo wokulwa
Kodwa ngandlela thile, uyakumyeka alahlekelwe yiDonkey Kong
Ukufundwa komlinganiswa: Qhagamshela, iQhawe eliThuleyo ‘leNqaku likaZelda’
Ikhonkco ngumdlalo wevidiyo wexesha lonke ngesibindi sakhe esizolileyo, kunye nokuzinikela kwakhe kwisizathu esikhulu
Njani ukuba umdlalo weVidiyo waseNtshona Won: Ukuqaqamba okuqaqambileyo 'kweRed Dead Redemption 2'
Umdlalo omtsha we-Rockstar's blockbuster kukuntywila emanzini kumda wobomi ngasekupheleni kwenkulungwane ye-19, kwaye inika abadlali bayo onke amanyathelo afanelekileyo ngelixa bethoba umdlalo wokudlala ukuphindaphinda ubomi eWest West
'Umhlali waseDolophini oMbi' uphosa uthotho kolunye ulwalathiso olutsha
Ufakelo lwamva nje lweZombie shooter luyakwazi ukunika imbeko kwizihloko ezidlulileyo ngelixa likhanyisa abalinganiswa abatsha. Isuka phi i-franchise isuka apha?
Ukufundwa komlinganiswa: Imisila, i-Ultimate Sidekick kunye neNkanyezi yaBona baBalaseleyo kwiFanfic ejikeleze
Iorenji (okanye imdaka?) Impungutye yadalelwa ukudlala uLuigi ukuba abe nguSonic Hedgehog's Mario. Kodwa njengokuba ebaleka kwibrakethi yethu ebonakalisile, unesazisi esomeleleyo esisesakhe, nokuba uSega akakuqondi oko.
Kodwa ngokunyanisekileyo, Fuck the 'Duck Hunt' Inja
Ibali le-'Super Mario Bros. 'likwabandakanya' ukuzingelwa kwedada, 'umdlalo wokudubula ohlanganiswe nesihloko seflegi se-NES. Kwaye ibali le-'Duck Hunt 'alinakuxelwa ngaphandle kokuvuma inja yomdlalo, i-smug jerk encinci ehlekisa isizukulwana sonke.
'Grand Theft Auto V' ihlala iJuggernaut eyahlukeneyo
Isihloko se-2013 ngumdlalo wesibini othengisa kakhulu kuwo onke amaxesha-kwaye ujongeka ngathi uqhubeke nokuhambisa iiyunithi zeminyaka ezayo. Yintoni, ukuba ikho, enokuthatha ukutshintsha loo nto?
Iimidlalo ezingama-25 eziBalaseleyo zeVidiyo zesizukulwana sokugqibela
Emva kokukhutshwa kweekhonsoli ezimbini ezintsha, lixesha lokujonga emva kwiXbox One kunye nemidlalo yePS4 ebime kakhulu
Ngaba Awunakulinga Ukuhamba Usikizi: Njani i-Ultra-eCelomngeni 'Imiphefumlo Emnyama' Yabakho Ibhalsam Yesibetho
Kwidirir yokomoya yenye yeyona minyaka imnyama kwimbali yakutshanje, ndafumana induduzo komnye wemidlalo yevidiyo eyayizama kakhulu
'Ubomi besiqingatha' bujika i-20: Ilifa eliNgapheliyo leValve's Revolutionary First-Person Shooter
Umdlalo wevidiyo oye waba nguvulandlela kwinkqubela phambili yokubalisa amabali eguqukayo ngakumbi nangakumbi xa abenzi bayo bakhuphela ngaphandle iindlela ze-intanethi kubalandeli bayo.
Eminye iMidlalo yeVidiyo eQhelekileyo ukusukela ngo-1998
Emva kokujonga iintsomi zemidlalo enje nge 'Ocarina yeXesha' kunye 'neMetar Gear Solid,' abasebenzi baseRinger bafaka isaphetha kwiphakheji yethu yokubuyela umva ngokujikeleza imidlalo ebalaseleyo esingekayibonakalisi
Ixesha liVili laseFerris eliFlethi: Ilifa eliNgapheliyo le'RollerCoaster Tycoon '
Ngo-1999, umdlalo wePC waguqula izigidi zabantwana baba ngabaqulunqi bepaki. Kwiminyaka engamashumi amabini kamva, ihlala ingumqondiso wobuchule kunye namandla oluntu kwi-Intanethi ukutshintsha ubomi bube ngcono.
Indlela etshabalalisayo yeMidlalo eNgekhoyo yoBuchule
Uthotho 'lwePanzer' ufakelo lwesithathu luhlala luyenye yeemidlalo ezinkulu zexesha lonke. Iminyaka engamashumi amabini emva kokudalwa kwayo, ihlala iphantse ayinakwenzeka ukuba iyidlale, inkolo yeklasikhi enobuqaqawuli bayo obubonisa usizi oluchaphazele ukukhula kwayo, useto kunye nebali.
Ukubuya 'kwabahlali bobubi 2'
Ukubuyiswa kwakhona komdlalo we-1998 kukulungelelaniswa okuthembekileyo kwebali lokuqala, nanjengoko izama ukophula umhlaba omtsha kwilungelo lokwandisa ilungelo lokuthengisa
Umdlalo owoyikisayo, thabatha uninzi lwento eyoyikisayo: Indlela ekhuselekileyo kwi 'Soma' sisisombululo sabadlali abadlala uloyiko.
Ukugxothwa yimidlalo yevidiyo eyoyikisayo kodwa usafuna ukuyidlala? Imidlalo eQhelekileyo iguqule isihloko sayo esidumileyo ukuze sibhenele kwintliziyo etyhafileyo.
I-Ode kwi-AI Sidekicks
'EyokuGqibela kuthi Icandelo II' isikhumbuza ukuba ngamanye amaxesha akukho nto ingcono kunesidikiki esinobuchule, esomntu, esilawulwa ngekhompyuter.
ipeyano enkulu emnyama
maka zuckerberg inethiwekhi yoluntu
Unyawo lweLoker ibhola
i-albhamu yakudala yedr